Giving legal warning to Qing Minya @ Mote Kywal Thae @ Natalie Tan @ Kym Kkym | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ရိုဟင်ဂျာအရေး ၊မြအေးနှင့်ရခိုင်ပြည်နယ်
ဗမာ? ဗမာ? ဗမာ? အဖြေမရှိတဲ့ “ဗမာ” ဆိုတာ… »
Giving legal warning to Qing Minya to stop the CRIMINAL DEFAMATION against me
Please stop all the nonsense of accusing me.
Because of you and your boss, Military Agent Provocateur James Mmt and Cyber-trooper friends’ indiscriminate attack on all the Myanmar Muslims including Bengali (Rohingya) and other Muslims around the world with your Hatred on Islam, the whole world’s Muslims, NGOs and Governments now know about the truth of how Muslims in Myanmar are mistreated in Myanmar by the Government and the majority. Thank you very much for those misguided, senseless, indiscriminate attacks. Now your plots failed and are suffering from the unexpected counter effects from OIC, UN and International Community. Remember, there isafamous saying, “Men propose but God disposed.”
I am defamed again by you after I wroteacomment at the Shwe Khit’s image propaganda “@ Qing Minya why R you staying in Johore? U should go back first. U are doing anti-Muslim actives with multiple accounts. Please stop the nonsense.”
Qing Minya is the (Burmese) Rakhine Chinese working in Johore Bahru. She is the assistant of Military Agent Provocateur James Mmt and both of them had defamed me frequently.
Qing Minya’s other accounts are Mote Kywal Thae, Natalie Tan, Kym Kkym etc.
Thet Thet Tun (သက်သက်ထွန်း) is also James Mmt’s shadow writer.
Qing Minya, Myat Thein Tun နဲ့ Soe Win Maung Soe had also madeafake Muslim girl’s account in Yangon and madeafake “riot” after one Myanmar girl insulted Islam in Dubai and fled.
As I amalaw abiding person, don’t worry about the unlawful aggression on you. Qing Minya, as you are in Johore Bahru, Malaysia and as your record is already with the Malaysia Cyber Crime Unit of Bukit Amman, I could just made an easy thing by givingagreen light phone call to police to arrest and charge you legally. FYI I have never involve in any illegal activities, no contact with underground gangs etc. as you wrongly accused and so I haveaclean record with Malaysian Government and police. They know me well. You and your comrades should better rush back to Naypyidaw to get away from the legal arms. But be careful, Naypyidaw is rightly changing policy now and you all would be kept in cold storage forawhile.
This entry was posted on August 18, 2012 at 4:07 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
7 Responses to “Giving legal warning to Qing Minya @ Mote Kywal Thae @ Natalie Tan @ Kym Kkym”
August 18, 2012 at 4:41 am | Reply
Be careful Thet Thet Tun, this letter is the proof that you are defaming me. If I report to police, you could be arrested and charged:
Sent: Thursday, August 16, 2012 12:23 PM
ဖေ့စ်ဘွတ်တွင် ရုိုဟင်ဂျာ အရေးအတွက် သမုိုင်းအချက်အလက်များ ရှာပေးနေသော Qin Minya (တရုတ်မြန်မာကပြား) အား အသက်အန္တာရယ် ပေးရန်အတိ ကြိုးစားလျှက် ရှိပါတယ်။ ဖြစ်နုိုင်ရင် အကြံညဏ်များ ပေးကြပါ။ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဆုိုတာ။
မနေ့တနေ့က သေသွားသော ရခုိုင်အမျိူးသားမှာ မူစလင်ဒေါက်တာ ကုိုကုိုကြီး ဆုိုသူက လူလွှတ်သတ်ခုိုင်းသည်ဟု မလေးရှားမှ လူအချို့က ပြောပါတယ်။ ဒေါက်တာကုိုကုိုကြီးကုို သိလျင် စောင့်ကြည့်ကြပါရန် နှင့် မိမိလုံခြုံရေးအတွက် ဂရုစုိုက်ကြပါရန်။
စကားချပ်းးဒေါက်တာကုိုကုိုကြီးသည် တုိုရွန်တုိုနေ ကုိုအောင်တင်နှင့် အတူတကွ ပူးပေါင်းစာရေးသားနေသူဟု ရှင်မင်းယာ က ပြောပါသည်။
August 21, 2012 at 7:41 pm | Reply
Dr. Ko Ko Kyi,
I am Thet Thet Tun who lives in Canada. Concerning letter I wrote about I only said ” It was alleged that Dr. Ko Ko Gyi sent people to kill two Rakhine Nationals”, I did not say it was you who actually killed two Rakhine nationals.
However, in your website post, you stated that ” Thet Thet Tun isashadow writer of James Mmt, which is completely wrong. James Mmt was living in Singapore until recently and was forced to live to save his life from muslim extremists.
August 22, 2012 at 7:38 am | Reply
My friend commented about her>>>
Qing Minya က ရှမ်းတရုတ်မဟုတ်ဘူး .. ရခိုင်တရုတ် .. သူ့အဖေကတရုတ်ကြီး .. အမေက ရခိုင်မ .. အစ်ကိုဓါတ်ပုံမြင်ဖူးတယ် .. ရန်ကုန်မှာနေတယ် .. ကြေးအိုးဆီချက်ဆိုင်မျိုးဖွင့်ထားတယ် ..
Qing Minya ဆိုတဲ့ကောင်မ .. ဘာကောင်မမှမဟုတ်ဘူး …. အဲဒီကောင်မ KL ရောက်စ စားစရာမရှိဘဲ နေ့တိုင်းခေါက်ဆွဲတထုတ်စားနေရတုန်းက ဖာလုပ်ဖို့ဆိုပြီး ဖာတွေနေတဲ့နေရာရောက်တော့ နောက်မြန်မာတယောက်ကကယ်လာတာ .. အခု Johor မှာတရုတ်ကလေးတွေကိုစာသင်တယ် .. ဒီကောင်မအင်္ဂလိပ်စာကောင်းတယ် .. ၀ံသာနုမှာရေးတာတွေများသောအားဖြင့် သူရေးတာ .. ဘာအဆင့်ရှိလို့ခြောက်နေတာလဲ .. မလေးရှားမှာတရုတ်သြဇာရှိလို့
ကျွန်တော်တခုပြောပါရစေ .. ဖေ့စ်ဘုတ်ရှိသမျှ ဒီကောင်တွေက မြန်မာနိုင်ငံက lawmakers တွေလား??? .. ဒီကောင်တွေက ပိုက်ဆံရလို့ အစိုးရ၀ါဒဖြန့်ပေးနေတာ .. မီးပွိုင့်မှာ စာရွက်ဝေတဲ့ အဆင့်ကလွှဲပြီးဘာမှမပိုဘူး .. အာချောင်တတ်လို့ စာရွက်ဝေရင်းစကားများတာ ဘဲရှိတာ ..
ဒီကောင်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ဘယ်လောက်ဘဲ blackmail လုပ်လုပ် ပြောင်ကြီးသိန်းစိန်စကားတစ်ခွန်းပြောင်းတာနဲ့ အားလုံးအလိုလိုပြောင်းရမှာဘဲ ..
ဒီကောင်တွေကိုစာရေးတုန့်ပြန်နေမယ့်အစား .. နေတဲ့လိပ်စာအတိအကျကို စုံစမ်းပြီး အဲဒီနိုင်ငံက အာဏာပိုင်တွေကိုအကူအညီတောင်းပြီး ကြိုးစားတာပိုထိရောက်မယ် .. ဒီကောင်မကတရုတ်ဖြစ်လို့ ခြောက်နေတာလား ..ကျနော်မြင်တာကတော့ ဂျိမ်းကြောက်ပြီး ထွက်ပြေးသွားရကတည်းက ဆရာကိုကိုကြီးကို ညှိုးနေကြတာ။ အခုလည်း ဆရာက ရှင်မင်းရာကို ပြောလိုက်တော့ သူတို့ထဲက အမာခံတစ်ယောက် ထပ်ပျောက်သွားမှာ ဆိုးလို့ Back fire လုပ်ကြည့်တာလို့ မြင်တယ်။ သူတို့အုပ်စုက ရှင်မင်းရာကို တော်တော် အားကိုးတယ်။
ရှင်မေရာက အဲ့ဒီလို ကိစ္စတွေမှာ အရမ်းကျွမ်းကျင်တယ်၊ ကျနော်လည်း အရင်က ရှင်မေရာဆိုတာကို သိပ်သတိမထားမိပါဘူး။ သူပြောမှ တကယ့်ယောက်ျားကြီးတွေကစ အထင်ကြီးနေရတဲ့ မိန်းမဆိုတာ သတိထားမိတာ။
August 24, 2012 at 3:06 am | Reply
Qing Minya @ Mote Kywal Thae @ Natalie Tan @ Kym Kkym READ THIS NEWS@ http://news.mmsy.info/news/5203
မလေးရှားနိုင်ငံ စွန်ရိုင်းပတာနီမြို့တွင် ရခိုင်အမျိုးသားတစ်ဦး သေဆုံးခြင်းမှာ အသက်ခရ၍မဟုတ်ဘဲ ကားမှောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း ပီနန်-မလေးရှားနာရေးကူညီမှုအသင်းမှ တာဝန်ခံ ကိုဝင်းသန်းထွန်းကပြောသည်။
“အသက်ခံရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဟိုက်ဝေးမှာ လော်လီမှောက်တာပါ။ ပီနန်မှာ ရခိုင်ကိစ္စ အရှုပ်အရှင်း မရှိပါဘူးခင်ဗျ”ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပြောသည်။
လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော ရခိုင်အမျိုးသားအသတ်ခံရသည်ဟူသော စာသားများနှင့် ဓါတ်ပုံများထွက်ပေါ်လာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာတွင် ၎င်းကပြောကြားခြင်းဖြစ်သည်။
ဇူလိုင်လ ၂၇-ရက်တွင် လော်လီကားမှောက်မှုကြောင့် မောင်တောမြို့နေ ရခိုင်အမျိုးသားကိုတင်လှိုင်နှင့် မလေးရှားနိုင်ငံသား တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကိုင်ရင်း မတော်တဆဖြစ်ပွားခြင်းကြောင့် အလုပ်ရှင်မှ လျော်ကြေးကိစ္စများတာဝန်ယူပေးကြောင်း အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပြောသည်။
“မဟုတ်မမှန် လူမျိုးရေး လှုံ့ဆော်တာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အသင်းကိုတော့ ဘယ်ကမှ ဆက်သွယ်မလာပါဘူး“ဟု အထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်ဖြစ်ပွားသော ပဋိပက္ခများနောက် မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်သော ရခိုင်အမျိုးသားများ အသက်ခံရသည့်သတင်းများ လူမှုကွန်ရက်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
August 24, 2012 at 3:18 am | Reply
Qing Minya @ Mote Kywal Thae @ Natalie Tan @ Kym Kkym and here servants (one had even insulted me again with fake kokokyi@kalar.com
220.255.239.231) Quite STUPID to falsely accuse me and repeatedly insulting me. I believe that he hate Kalars because he isa“ဟီးး စောက်ပေါ step son ofaကုလား”
Myanmar military Cyber-troopers every were especially in Malaysia | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi Says:
May 20, 2015 at 3:20 am | Reply
[…] Giving legal warning to Qing Minya @ Mote Kywal Thae @ Natalie Tan @ Kym Kkym […]
August 20, 2015 at 1:15 pm | Reply
Yes..I also don’t believe so I wrote like this…”I just shared…Don’t know anything about the truth..” ALTHOUGH she repeatedly published lies about2of you, Mg Mg and me. My family and I even have to face multiple insults and threats. Myanmar Embassy give disturbances not only me, my family and relatives…WHICH IS ILLEGAL and could sue back one day as CRIMES AGAINST HUMANITY. At last I had to stay with the expired Passport for about one year. Qing Minya, Hmuu Zaw, U Ye Thut, Home Minister and Foreign Ministers are earmarked for my complaint at UN and Courts in Malaysia.
But in my life Allah swt has mercifully given me the strength to overcome all the difficulties and Alhamdulillah give me the will to fight back and win over all those adversities. Masha Allah He had given me to turn over those failures, to use them as pillars to win over greater success. My love for Burma had prevented me from applying citizenship in other countries asahave no heart to renounce my Myanmar Passport and citizenship. When they refused to extend my PP I have NO CHOICE but had to divorce that Satan Myanmar ruled by extremist racist criminal Bama Buddhist Generals.
The above was wrote in response to this FAKE NEWS about her…စံတော်ချိန် နေ့စဉ်သတင်းစာ
၁၄နှစ်အရွယ် မြန်မာတိုင်းရင်းသူ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦး အပျိုစင်ဘဝကို ကာမဆက်ဆံရန် ထိုင်းနိုင်ငံသားထံသို့ ရောင်းချကြံစည်သူအမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးရရှိပြီး ပူးတွဲပြစ်မှု့ကျူးလွန်သူ (ကြိုးကိုင်ခိုင်းစေသူ)ရှင်မင်းယာမှာ ရှောင်တိမ်းလွတ်မြောက်နေဆဲ
ကောင်းခန့်လင်း + ကိုဆံရှည်
ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် တာချီလိတ်မြို့မှာ သြဂုတ်၈ရက်နေ့က မြန်မာတိုင်းရင်းသူ ၁၄နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးအပျိုစင်ဘဝကို စတင်ဖျက်စီး ကာမဆက်ဆံရန်အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံသားထံသို့ ရောင်းချကြံစည်နေသူ အမျိုးသမီးအား ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။အမျိုးသမီးထွက်ဆိုချက်မှာ လူကုန်ကူးအပျိုစင်ကာမသွေးသားရောင်းရန်ဖုန်းဆက်ကြိုးကိုင်ခိုင်းနေသူ ရှင်မင်းယာဆိုသူပါဝင်နေပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြောင်းသိရသည်။
ွှရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း တာချီလိတ်မြို့နဲ့ တာချီလိတ်မြို့နယ်တွင် ရှမ်း-မြန်မာ-အခါ-လားဟူ-လီယေား လူမျိုးပေါင်းစုံ သူ့မြို့သူ့ရွာ သူ့နေရာ သူ့ဒေသအသီးသီးမှာ သီးခြားစီ နေထိုင်နေကြပေမဲ့ အများစုကတော့ မီရိုးဖလာ တောင်ယာလုပ်ငန်းများအပြင် တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်ရောင်းချစားသောက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။
အများစု တိုင်းရင်းသားများကတော့ လူမှုဘဝ ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှု့ အားနည်းခြင်း-မြင်ကျဉ်းမှု -လူမှုဘဝ ဆင်းရဲခြင်း-အမတန် နှိမ့်ကျနေကြပြီး စသည့် လက္ခဏာများတွေ့နေရပြီး လူပွဲစားများ၏ လိမ်လည်လှည့်ဖျားမှုတွေကနေတဆင့် အခုလို အပျိုစင် ကာမဆက်ဆံရန်အတွက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်တဲ့ တရုတ်-လာအို-ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေဆီကို ရောင်းစားခံနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပိုက်ဆံအနည်းငယ်ရှိ တိုင်းရင်းသူတချို့ကတော့ ထိုင်းဝမ်ဘက်တွေကို နှစ်စာချုပ် စာတမ်းဖြင့် သွားရောက်ပြီး မယားငယ်အဖြစ် လုပ်ငန်းတွင်ကျယ်စွာ လုပ်ကိုင်နေကြပါသေးတယ်။
အများအပြား အပျိုစင် ပန်းဦးခြွေ ခံနေရသည့် မိန်းကလေးငယ်တွေဟာဆိုရင် ဆယ်ကျော်သက်များဖြစ်ကြသလို မိဘများ၏ ဖိအားပေးမှု မိန်းကလေးငယ်တွေကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်စားမှု -အပျိုစင်ဘဝဖြင့်စတင်
ကာမဆက်ဆံရပါက ထိုင်းဘတ်ငွေ-တရုတ်ငွေ-များနှင့်အတူ -တိုက်တလုံး-ကားတစီး-ဆိုင်ကယ်တစီး ရလိုမှု စိတ်ရမ္မက် လောဘတွေကြောင့် အခုလို လူမသိ သူမသိ ကာမဆက်ဆံခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုမျိုး အပျိုစင်ဘဝ ရောင်းစားပြီး ကာမဆက်ဆံခံနေကြသည့် ကိစ္စရပ်တွေကတော့ အဲဒီဒေသမှာ မကြာခဏဆိုသလို ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ ရှိကြပြန်ပါသေးတယ်။
၁၄နှစ်အရွယ် မြန်မာတိုင်းရင်းသူ မိန်းကလေးငယ်ကတော့ သြဂုတ်လ ၈ရက်နေ့ ထိုင်း-မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အမှတ်(၁)ချစ်ကြည်ရေးတံတားပေါ်မှာ မသင်္ကာစရာ ကာမပွဲစားနှင့်အတူ တာချီလိတ်သက်ဆိုင်ရာများက တွေ့ရှိခဲ့လို့ ပန်းဦးမခြွေခင် အခုလိုမျိုး ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိန်းကလေးငယ်၏ နာမည်နဲ့ နေရပ်လိပ်စာကိုတော့ တာချီလိတ်မြို့မ ရဲစခန်းကို ဖုန်းဆက်ပြီး မေးကြည့်ရာမှာတော့ အသေးစိတ်ပြောပြခြင်း မရှိခဲ့သလို ကာမပွဲစား အမျိုးသမီးမှာ နှစ်ဦးဖြစ်ပြီး မဆန်းဆန်းကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးထွက်ဆိုချက်အရ မမြမြခင်(ခေတ္တ-မလေးရှား) လက်ရှိရန်ကုန်တွင်ရောက်ရှိနေသူ (ကြိုးကိုင်ခိုင်းစေသူ) ဟု သိရပါသည်။
တာချီလိတ်မြို့ခံတစ်ဦးမေးကြည့်ရာမှာတော့ “ကျွန်တော်တို့ တာချီလိတ်မြို့နဲ့ တာချီလိတ်နယ်ကတော့ ဒီလိုမျိုး အပျိုစင်ရောင်းစားခံနေရတာကတော့ မကြာခဏ ကြားနေရပါတယ်၊တချို့ဆိုရင် မိဘတွေကို အသိမပေးဘဲ ပွဲစားတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ကာမဆက်ဆံနေကြပါတယ်၊နောက်ပြီး မိဘများ၏ ဖိအားပေးမှုတွေကြောင့် ပါပြန်ပါသေးတယ်၊အပျိုစစ်စစ်ဆိုရင် ကားတစီးရမယ်-ဆိုင်ကယ်ရမယ်-နေစရာ တိုက်တလုံးရမယ်-ပိုက်ဆံကြေးများများရမယ်၊သူဌေး မယားငယ်တွေ လုပ်နေကြသည့် ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးငယ်တွေလည်း ဒီမှာက ပေါများနေတယ်ဗျ၊ဒီလုပ်ငန်းတွေကို တိုင်းရင်းသားအများစုက လုပ်လေ့လုပ်ထ ရှိပါတယ်၊အပျိုစစ်မှနော်၊အပျိုစစ်ရင် ကြေးများများရမယ်၊အပျိုမစစ်ရင်တော့ ကြေးနည်းမယ်၊ရတဲ့အခွင့်အရေးကလည်း နည်းမယ်ဗျ၊ဒီကိစ္စတွေကတော့ ဒီဒေသမှာ အများကြီးပါတယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
ကာမပွဲစား အမျိုးသမီးဟာဆိုရင် အရင်က မြန်မာဘက်ခြမ်းမှာ အပျိုစင်(၂)ယောက်ကို ကာမကုန်သည်ထံ ရောင်းချခဲ့ဘူးပါသေးတယ်။
ဒီ၁၄နှစ် မြန်မာတိုင်းရင်းသူတစ်ယောက်ကို ကာမကုန်သည် ထိုင်းနိုင်ငံသား Mr.Som Chai(ခ)Janworaratထံ ရောင်းချဖို့ ကြံစည်နေရင်း အခုလို အပျိုစင်ဘဝ မပျက်စီးခင် စပ်ကြား လုပ်ဆုပ်လက်ကိုင် ဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့ တာချီလိတ် အာဏာပိုင် တချို့ထံမှ သိခဲ့ရပါတယ်။
ကာမပွဲစားနှင့်နောက်ကွယ်က ဖုန်းဆက်ခိုင်းစေသူများကတော့ မသိနားမလည်သေးသည့် တိုင်းရင်းသူများကို လိုက်လံစည်းရုံးပြီး ကာမပွဲစားအဖြစ် လုပ်ကိုင်စားသောက်နေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
LeaveaReply to Myanmar military Cyber-troopers every were especially in Malaysia | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi Cancel reply